I-amazon echo vs. iGoogle ekhaya: yeyiphi engcono?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo IAmazon Echo vs iKhaya likaGoogle: sesiphi isithethi esifanelekileyo esikulungeleyo?
IAmazon Echo vs iKhaya likaGoogle: sesiphi isithethi esifanelekileyo esikulungeleyo?
Izithethi ezi-Smart ziludidi olutsha lweemveliso eziye zamkelwa kancinci. Baye baba yinto ngasekupheleni kuka-2014 xa iAmazon yaphehlelela i-Echo-isithethi esisezantsi esine-cylindric, kunye nomncedisi we-Alexa owakhelweyo onokuthi ulawule usebenzisa ilizwi lakho.
Kwiminyaka embalwa kamva kwaye siyabona ukuba imakethi yezithethi ezikrelekrele iphuhlisile kancinci. Abavelisi abakhulu, abanjengo apile kwaye uphando , Sele bezikhuphile izixhobo zabo ezitofwe nge-AI, besenza iinzame zabo zokuqala ukoyisa ekhayeni lakho. Kwaye ekubeni zininzi izinto onokukhetha kuzo ezinokubakho, kunokuba ngumsebenzi onzima ukusho ukuba yeyiphi eyona ilungileyo, ngakumbi ukuba uceba ukuthenga enye. Kungenxa yoko le nto sigqibe ekubeni senze uthelekiso phakathi kwezona zithethi zilumkileyo kwimarike ngoku - iAmazon Echo kunye neKhaya likaGoogle. Nokuba nguwe & apos; xa usendleleni uyokuthenga isithethi sakho sokuqala, okanye wena & apos; siyiteknoloji enxanelwe ubuchwephesha, musa ukuba neentloni kwaye ufunde kwiAmazon Echo ngokuchasene nenqaku lasekhaya likaGoogle.
IAmazon EchoUhlobo lwesibini lweAmazon Echo ngumlandeli wemveliso echaza intengiso eyayiyinxalenye yokuqala ye-Echo. Ukuthwala umthwalo wesithsaba ngumsebenzi onzima, kodwa i-yesibini-gen Amazon Echo iyawenza kakuhle umsebenzi. Uyilo luhleli luhle ngokufana ne-Echo yokuqala, okuthetha ukuba ii-apos zide kwaye ziyindilinga, umahluko kuphela kukongezwa kwezinto ezintsha zokwakha, njengokhuni nentsimbi. Kwaye ngenxa yokuba iAmazon Echo kuqala yayenzelwe ukuba sisithethi, kufanelekile ukuba ilungile kwisebe lesandi. Kwaye kunjalo. Ukwenza umsebenzi wenziwe, isithethi sine-2.5 'woofer kunye ne-0.6' tweeter ngaphakathi, zombini zixhotyiswe nguDolby, ukuhambisa amava amahle odiyo, isityebi kwiitoni ezimnandi. 'Ingqondo' yeAmazon Echo yiAlexa- iiAmazon & iiapos ezizezona zincedisayo ezikrelekrele ezenziwe ukuba zilungele indalo yeemveliso zayo. I-Alexa inokwenza phantse yonke into oyicelayo kuyo, kodwa thina & apos; siza kuthetha kakhulu ngayo ngomzuzwana.
Ikhaya leGoogleIkhutshwe iminyaka emibini emva kwe-Echo, iKhaya likaGoogle lalenzelwe ukuba lihlangane ngempumelelo nomlingane walo waseAmazon kuyo yonke into onokucinga ngayo. Imidlalo yasekhaya kaGoogle uyilo olucekeceke lwe-cylindrical, olunokulingana kakuhle nakweyiphi na indawo yangaphakathi ngenxa yokhetho onalo, kodwa thina & apos; siyakufika kuloo mzuzwana. Ungatshintsha kwakhona phakathi kwemibala eyahlukeneyo, uyenzele igajethi eyenziwe ngokwezifiso ngokupheleleyo. Kwaye kuba iKhaya likaGoogle lelokuqala kwaye liphambili kwisithethi, kufuneka livakale lilungile. Kwaye kuyasusa isitya esityhidiweyo sityhila isithethi esiphambili, ecaleni kwamabini amancinci. Isandi kwezi zintathu zivelisayo asinto imbi- ngelixa ungeke uve iithoni ezicacileyo, isandi siyangxola kwaye sinee-bass ezithile, ezingenayo i-Echo.
IAmazon EchoAyikhathaleli nokuba isithethi esikrelekrele sivakala silungile okanye akunjalo ukuba asinakho ukuhambelana nezinye iimveliso ezikrelekrele (okanye wena & apos; re Apple). Ungakhathazeki, njengoko iAmazon Echo inokusebenza phantse kuyo yonke igajethi efanelekileyo phaya, ikuvumela ukuba uyilawule ngokusebenzisa ilizwi lakho. Sithetha ngazo zonke iintlobo zeekhamera zokhuseleko, ii-smart locks, izibane, iingcango, izixhobo zombane, uyinike igama- i-Echo isebenza kakuhle kwezi. Nangona kunjalo, ezinye izixhobo zinokufuna ukuba ukhuphele kubuchule be-Alexa (ngokusisiseko usetyenziso olusekwe kwilizwi) kwiVenkile ye-Alexa Skill, ke yigcine engqondweni.Ikhaya leGoogleLe yenye yeendawo ikhaya likaGoogle eliwela ngasemva kweAmazon Echo. Ungasenzi ngokungalunganga-Ikhaya likaGoogle nalo linokubhangqa kwaye likunike ulawulo kwezinye zezinto zobugcisa ezithandwayo phaya, kubandakanya iPhilips Hue lightbulbs, zonke iintlobo zekhamera zeNest kunye neethermostats, nokunye okuninzi. Nangona kunjalo, iKhaya likaGoogle lisaswele ukuhambelana ngokuthelekiswa ne-Echo, imizekelo ayisiyo nkxaso yokuKhanyisa ii-bulbs ze-smart, iimveliso zekhaya ezi-Insteon, kunye nokunye, okuyibeka emva.
IAmazon EchoAkuthandabuzeki ukuba intliziyo nomphefumlo weAmazon Echo ngumncedisi wayo owakhelwe-ngaphakathi, obizwa ngokuba yi-Alexa. Idityaniswe nemic ehlala ikwi-mic, ubukrelekrele bokusebenza buvumela ukuba ulawule isithethi usebenzisa igama elishushu elithi 'Alexa', elandelwa yiyo nayiphi na into oyicelayo. Umzekelo, 'I-Alexa, zithini & apos; imozulu ngoMvulo?'inokuqhubela umncedisi ukuba ayikhangele kwaye ayitsho ngokuvakalayo. Unokusebenzisa i-Alexa ukwenza iifowuni, ukuthumela imiyalezo, ukongeza imicimbi kwikhalenda yakho, ukuseta ishedyuli yakho nokunye okuninzi. Ukulawula izixhobo ze-smart ekhaya nako kukhetho, ukuba ezo zinto zidibene ne-Echo. Ukudlala umculo kulula kakhulu-ubuza nje i-Alexa ngengoma oyikhethileyo, kwaye uya kuyidlala. Gcina ukhumbula inkonzo engagqibekanga yomculo yiAmazon Prime Music, kwaye ukuba ufuna into edlalwa kwiSpotify ngokomzekelo, kuya kufuneka uyichaze.
'Iindlela' yenye indawo yokuthengisa yesibini-gen Amazon Echo. Ifumaneka kokubini ekuhambeni kwaye ngelixa usekhaya, 'iiRoutines' zikuvumela ukuba uqokelele iseti yemisebenzi kunye, eya kuthi ibangelwe kukuthetha isivakalisi esithile. Ukukunika umzekelo, uthi 'Alexa, molweni ekuseni!'ungalayita izibane okanye uphakamise amakhethini (ukuba unazo & iiapos ezikrelekrele), nyusa ubushushu be thermostat, kwaye uvule iTV. Yonke into eyithethileyo, 'iiRoutines' yinto entsha kwaye ineziphene, ukungakwazi ukukhetha ibinzana (eliqala ngesiqhelo) ngokwakho, kodwa iAmazon iyaqhubeka nokuphucula inqaku ngokukhupha uhlaziyo ngokuthe ngcembe.
Enye into eluncedo ye-Echo luluhlu lwezakhono ze-Alexa. Ezi zinokukhuphela usetyenziso olusekwe kwilizwi, olwenza ukuba zonke iintlobo zemisebenzi. Ukwenza umzekelo, ukhuphele usetyenziso lwe 'Hill & apos; s Pet Nutrition', ekuvumela ukuba ubuze i-Alexa malunga neengcebiso zezempilo zenja / yekati yakho. Uluhlu lwezakhono ze-Alexa lukwabandakanya imidlalo esekwe kwilizwi, njengeyaziwayo 'Guess My Name', okanye 'Simon Tap', apho uphinda ipateni ngokucofa izibane ze-Echo kunye neapos.
Ikhaya leGoogle Ikhaya likaGoogle linomncedisi okrelekrele walo, elinceda ukuba liyanelise iimfuno zakho. I-Apos; ebizwa ngokuba nguMncedisi kaGoogle kwaye nazo ziyafumaneka kwi-smartphone yakho. Kuyenzeka ukuba ube ngumncedisi onolwazi kakhulu kwaye uya kuphendula nawuphi na umbuzo owuphosa kuwo. Ngaba iiYankee ziphumelele phezolo? Zithini & apos; s imozulu e-Honolulu? Ufika nini umoya waseMelika ngenqwelomoya eya eParis? Ungabuza loo mibuzo kunye nezinye ezininzi ngokuqala ukuvusa isithethi ngegama elithi 'Heyi / Kulungile, uGoogle'. Yintoni engaphezulu, ukuba ubuza omnye umbuzo ngaphakathi komxholo, uGoogle uya kuphendula, awenze ukuba azive ngathi yincoko yokwenyani. Ukuthetha ngeencoko, iKhaya likaGoogle liya kuva nantoni na oyithethayo nokuba awuphindanga ube ngumgangatho ngenxa yokufunyanwa kwelizwi ngokugqibeleleyo.
Xa kuziwa ekudlaleni umculo, iKhaya likaGoogle kulula ukulisebenzisa njengogxa walo waseAmazon-uyayichaza ingoma kunye nomculi kwaye uya kuyonwabela kwimizuzwana embalwa. I-Google Play Umculo yinkonzo yokusasaza umculo, kodwa unokukhetha phakathi kweSpotify, iPandora, iYouTube ebomvu, iApple Music, njalo njalo. Iinkonzo zeAmazon azixhaswanga, ke akukho Mculo uVakalayo okanye iAmazon Prime Music. Ukusasaza umculo kwifowuni yakho lukhetho kuzo zombini i-Echo kunye neKhaya likaGoogle.
IAmazon EchoUhlobo lwesibini lwe-Echo lulandela ipateni yoyilo ebekwe ngandulelayo. Isisilinda, kodwa isifutshane kwaye ibanzi ngeli xesha, ifikelela kwi-5.9 'ukuphakama kunye no-3.5' ububanzi. Izipikha zesithethi zibekwe kwisiqingatha sesithethi, kwaye ukuba ziyabonakala okanye azixhomekekanga kwi-Echo Cover oyikhethileyo. Ukuthetha ngamaqweqwe, unokukhetha phakathi kwamaqokobhe amathandathu ahlukeneyo kwiAmazon Echo yakho. Ezo zisebenza njengezikhumba, onokuzitshintsha nanini na xa uthanda kwaye zezi zilandelayo:
Iingubo zokuvala: Amalahle, uHeather Grey, iSandstone
Izinto zokuvala Izinto: Isilivere, i-Oak, i-Walnut
Yile nto inokubonakala ngathi i-Echo yakho
Kwaye ngenxa yokuba uyakwazi ukulawula iAmazon Echo ngokwasemzimbeni, kukho amaqhosha amane ngaphezulu kwayo - amaqhosha evolumu phezulu / ezantsi, iqhosha lokuthulisa imakrofoni (kulawo matyala xa ungafuni i-Alexa imamele), kunye neqhosha lesenzo, ezinokwenza izinto ezahlukeneyo, ngokwemeko.
Ikhaya leGoogleNgaba uke wambona uhlaziyekayo ngokuzenzekelayo? Leyo yindlela iKhaya likaGoogle elikhangeleka ngayo, kwaye inokuphosakela ngokulula ngenxa yolunye uhlobo lwefanitshala ukuba awunazo iindwendwe ezingezo-geek. Ikhaya likaGoogle limile okwe khoni, lifikelela kwi-5.6 'ukuphakama kunye no-3.8' ububanzi, apho ulawulo lwayo olunokubamba khona, kunye nezibane ze-LED, ezisebenza naphi na xa usebenzisa. Ngaphambili kukho iqhosha lokuvala imic.
Ikhaya leGoogle lingenziwa ngokwezifiso, nazo. Ungasitshintsha isiqingatha esisezantsi sesixhobo (uGoogle ubiza eso 'siseko'), esifihla izithethi, sibe yenye yeendlela ezine ezahlukeneyo: iplastikhi emnyama, ilaphu leorenji, iplastiki emdaka, okanye ilaphu elingwevu (liza ngokwakhona)
IAmazon EchoI-Echo ihlala ithengisa nge- $ 99,99 kwi-Amazon.com kodwa inkampani ngamanye amaxesha iqhuba izaphulelo kuyo (ngexesha lokubhalwa, iAmazon Echo inokuthengwa ngesaphulelo se-15% se- $ 85). Unako kwakhona ukuqokelela iAmazon Echo ngomnye umkhiqizo ukuze ufumane isaphulelo esikhulu, esisivumelwano, naso. Ungathenga uhlobo lwesibini lweAmazon Echo apha .
Zombini iGoogle kunye neAmazon zihlala ziqhuba izaphulelo kwizithethi zazo ezikrelekrele.
Ikhaya leGoogleIsithethi esinegama elichanekileyo kuGoogle sibiza kakhulu kune-Echo, ixabiso ngama- $ 129, kodwa amathuba okuba ungadibana nesaphulelo, njengoko uGoogle ebaqhuba rhoqo. Kukho nezibonelelo ezininzi, umzekelo, ukuba uthenga iKhaya likaGoogle kunye neMini yasekhaya yakwaGoogle, uya kugcina i $ 25. Ungathenga isithethi esiKhaya seGoogle apha .
Kwaye ophumeleleyo ngu ... iAmazon Echo!
Ngoluhlu lwezakhono ze-Alexa, iAmazon Echo inokwenza nantoni na oyicelileyo. Fowunela isizalwane? Jonga. Bhala umntu umyalezo? Jonga. Rhoqo ezitshintsha ngokupheleleyo amava akho? Jonga. IAmazon Echo inokungena nakweyiphi na ngaphakathi njengoko ineeqokobhe ezinemibala eyahlukeneyo onokutshintsha phakathi kwayo.
Ewe, i-Alexa ayinangqondo njengoMncedisi kaGoogle kwaye awunako ukwenza iseshoni yemeko ye-Q & A nayo, kodwa i-Echo ibonelela ngexabiso elininzi kakhulu ukuba linganakwa. Inyani onokuyithenga ngokuthe ngqo kwiAmazon usebenzisa ilizwi lakho kuphela sisizathu esilungileyo ngokwaneleyo sokuthenga i-Echo, kodwa ayisiyiyo nje into ekufuneka inikezele ngayo. Ivenkile yeZakhono ze-Alexa yindlela emangazayo yokuphucula ukusebenza kwesithethi esihlakaniphile, kwaye inyani onokuyenza kwi-multitask usebenzisa kuphela ilizwi lakho kusetyenziswa uphawu lweeRoutines ngokwenene ngumdlalo wokutshintsha umdlalo. Hayi, asitsho ukuba iKhaya likaGoogle alilunganga-kwaye yiyo nje into yokuba iAmazon Echo ingcono. Kwimeko apho wena & apos; ujonge isithethi esipheleleyo, esifikelelekayo, esikwenzeka ukuba sibe sesokuqala, ungakhangeli ngaphezulu kweAmazon Echo.
Uvavanyo lwe-samsung galaxy j7 2018
pokemon ukuya ejimini kuhlaselwa
Umhlaba ophakathi: Umthunzi weMfazwe uza kwizixhobo ze-Android kunye ne-iOS ngoSeptemba 28
Uyisebenzisa kanjani i-WebDriver kwimo engenintloko